ဆင်ခြေ၊ ဆင်လက် ၊ ဆင်နားရွက် – ပြင်းရှတဲ့ ၀ိုင်တစ်ခွက်ပေါ့
This entry was posted in ဟိုဟိုဒီဒီ and tagged individualism, Life, World of Conflict. Bookmark the permalink.
← လူမှန် နေရာမှန် ?
ရပ်တည်မှု၊ နားလည်မှု →
6 thoughts on “ဆင်ခြေ၊ ဆင်လက် ၊ ဆင်နားရွက်”
MrDBA | June 10, 2009 at 12:11 am
မရေးတာကြာရင် ပိုပြီးအလှမ်းဝေးသွားမယ်။ နဲနဲချင်းပေးပေါ့ ကိုယ်ပေးချင်တာကို။ အများကြီး ရေးမှလို့ သဘောမထားနဲ့။ ရေးနေဖို့ဘဲလိုတယ်။
kom | June 10, 2009 at 12:12 am
အားလုံးကိုလွမ်းတာဘဲ။ ကိုဂီကိုလည်းလွမ်းတယ်။ သူကတော့မေ့နေပါပြီလေ။
mabaydar | June 10, 2009 at 2:29 am
ညီမရေ.. သိပ်စဉ်းစားမနေနဲ့… စိတ်ထဲရှိတာသာရေးချလိုက်ပါ.. ပိုစ့်ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်..
ကိုသာသာ | June 10, 2009 at 8:58 am
Shopping Mall တွေသွားရင် ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ Energy ကို စုပ်ထုတ်လိုက်သလိုကုန်သွားတယ်။
MrDBA နဲ့ တောထဲကိုလိုက်ပြီး သဘာဝ တရားတွေနဲ့ ထိတွေ့ရင်
(ဟဲ့..ဟဲ့ ငါပြောတာ ဘာအဓိပ္ပါယ် ရောက် သွားပါလိမ့်) သဘာဝ ကပေးတဲ့ Engergy တွေပြည့်ပြီး ရွှင်လန်းသွားမယ်။ ဟိ ဟိ။
MrDBA ပြောတာမှန်တယ် ရေးနေဖို့ပဲလိုတယ်။
မင်းအိမ်ဖြူ | June 10, 2009 at 4:19 pm
လာ၏ ၊ ဖတ်၏ ၊ ပျောက်နေတာကြာပြီ ၊၊
ကုမ်ရာသီသူ | June 10, 2009 at 9:48 pm
ကိုကြီး ဒီဘီ>> ပေးရမှာ အားနာနေတာဗျ။ တခါတရံ ၀ိုင်က အပြင်းလွန်သွားတတ်တာမျိုး။ `အားနာလိုက်တာ အချစ်ရယ်။ အားနာလိုက်တာကွယ်´ ဟီး 😀
အမကွမ်>> ကိုဂီ မေ့နေရင် သွားအော်ကြမယ်လေ။ `မုန်းမုန်းမေ့မေ့… မုန်းမေ့ပြီလားလို့ မေးချင်တယ်´ စီပုံး မရှိလည်း ဒီအတိုင်း အော်ကြတာပေါ့။
မဗေဒါ>> ခုလေ….. စိတ်ထဲရှိသမျှ ပြောချင် … ဒါပေမယ့် သင့်တော်မလားတွေး….. ကိုယ့်အချစ်က ခုတော့ အရွယ်လွန် (အဲ….. သီချင်းဆိုရင်း အရှိန်တွေ လွန်ကုန်ပြီ။ ဇော်ဝင်းထွဋ်သီချင်းလေ။ ဟိ)
ကိုသာသာ>> လောကသစ်တစ်ခုတည်နေ……သဘာဝရဲ့ ရင်သွေးငယ်တွေ…… (တောရိပ်ကို ခိုရရင်တော့ ကောင်းလေစွပေါ့ဗျာ။ ဒီတစ်ပုဒ်ဆိုရတာ ငယ်တုန်းကလို အရှိန်မရတော့ဘူးဗျ။ အဟမ်း၊ အဟတ်၊ အဟွတ်။ :P)
မင်းအိမ်ဖြူ>> အဆင်ပြေပါတယ်ကွယ်….. အပျောက် ကောက်နေလို့။ …..(သီချင်း စဉ်းစားလို့ မရတော့ဘူး။ ဦးနှောက် ဂျမ်းဖြစ်သွားပြီထင်တယ်။ ဘေးနားက လင့်ပေးထားတာတွေမှာသာ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ နားဆင်တော်မူကြပါကုန်)